पत्रपत्रिकामा देश : कृषि अनुदान कार्यक्रम परिमार्जन हुने
विराटनगर १३ असोज । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यवसायिक कृषि विकास तथा पशुपालनको क्षेत्रमा दिने अनुदानको कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
सरकारको अनुदान कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि कार्यविधि पारदर्शी नभएको, ठुला किसानलाई मात्रै फाइदा हुने, साना किसानलाई नछुने भन्दै प्रदेश सभा सांसदहरुले चर्काे विरोध गरेका थिए । अघिल्लो वर्षसमेत सिमित जिल्लामा केन्द्रीत गरि बजेट सकेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । विरोध आएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थगित गराएको अनुदान वितरण कार्यक्रम नयाँ कार्यविधि बनाएर वितरण प्रकृया अघि बढाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले बताए । वास्तविक किसानसम्म सुचना नपुगेको र सुचना प्रणालीलाई किसान सम्म पुग्ने गरि व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पनि निर्दशन दिएको छ । केही कार्यक्रम परिमार्जन र परिवर्तन समेत हुन सक्ने डा. उप्रेतीले बताए । यो समाचार जनविद्रोह दैनिकमा छ ।
उद्घोष दैनिकमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगरमा सार्वजनिक शौचायलको अवस्था बेहाल रहेको छ । व्यवस्थापन नहुँदा मुस्किललेमात्रै शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विराटनगरमा महानगरको स्वामत्विमा १ दर्जन शौचालय भएपनि प्रयोग गर्ने हालतमा कुनै छैनन् । शौचालयकै कारण बजारमा काम लिएर आएकाहरु चाडै घर फर्किनु पर्ने बाध्यता छ । सर्वसाधारण अपरझट शौचालय जानु परे अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।
व्यापारीको दुर्दशा, फुटपाथमा भीडभाड, सटरमा हाई काढ्दै शिर्षकमा ब्लाष्ट टाइम्समा मुख्य समाचार छ । आइतबारबाट दशैँ शुरु भएपनि इटहरीमा सोचेजस्तो व्यापार नभएको भन्दै व्यापारीहरुले निरासा व्यक्त गरेका छन् । फुटपाथ व्यवसायी भने मालामाल भएका छन् । तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाको कारण पनि इटहरीको व्यावसाय खस्किएको हो । इटहरीका कपडा व्यवसायी किरण न्यौपानेले दशैं शुरु भएपनि किनमेल शुरु नभएको बताए ।
नागरिक पूर्वेलीमा सुनसरीको धरानमा खेलग्राम निर्माणको तयारी शुरु भएको समाचार छापिएको छ । प्रदेश नम्बर १ को खेलकुद हब बनाउने लक्ष्य लिएर खेलकुद ग्राम सहित धरानको समग्र खेल संरचनाहरुको एकीकृतरुपमा डिपिआर बनाउने काम शुरु भएको छ । धरान उपमहानगरपालिका अन्तरगतको नगर खेलकुद विकास समितिले खेलकुदको एकीकृत डिपिआर बनाउन लागेको हो ।
नागरिक पूर्वेलीमै दलित बिहे गर्दा किरिया गर्नबाट बन्चित शिर्षकमा समाचार छ । भोजपुरको भोजपुर नगरपालिका ११ आम्तेकका ३२ वर्षीय चन्द्र खड्कालाई बाबुको मृत्यु हुँदा परिवारले सँगै किरियामा बस्न नदिएको भन्दै प्रहरीमा ठाडो उजुरी दिएका छन् । दलितसँग विवाह गरेको कारण आफूलाई किरिया गर्न नदिएको भन्दै एकसरो सेतो कपडामा खाली खुट्टा सदरमुकाम भोजपुर आएर उनले ठाडो उजुरी दिएका हुन् ।